ट्यूटोरियल र ट्रिकहरू कसरी मर्मत गर्ने र सबै प्रकारका चीजहरू ठीक गर्न सिक्नका लागि - Ikkaro
केहि समय अघि मैले कसैलाई पढेको पढेको थिएँ:
मेरो बुबाले मलाई सिकाउनु भएको छ कि हामी चीजहरू तोड्दा लज्जित हुनु पर्दैन तर कसरी मर्मत गर्ने भन्ने कुरा जान्नुहुन्न।
र यो सत्य हो। र मलाई लाग्छ कि ब्लग मर्मतको योग्य छ जहाँ म मानिसहरूलाई माइक्रोवेभबाट प्लेमबिलमा सबै प्रकारका चीजहरू ठीक गर्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्दछु।
बिच्छेद हुने सबै इलेक्ट्रोनिक्स हुँदैन। एक साधारण खेलौना, प्लास्टिकको एक टुक्रा निश्चित गर्न सकिन्छ र यो जस्तो सरल जस्तो देखिँदैन यदि हामी सामग्रीहरू कसरी काम गर्ने भनेर जान्दैनौं वा हामी कसरी टुक्रा खोल्न जान्दैनौं भने।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले हो वा हो को संग्रह मा एक पटक हेर्नुहोस् निर्माताहरू र मर्मत प्रकट हुन्छ हामीले के गर्यौं
हामी के हेर्न जाँदैछौं?
सबै प्रकारको मर्मतहरू जुन तपाईं गर्न वा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेका मात्र घरेलु उपकरणहरू। तर अन्य वस्तुहरू जुन कहिलेकाँही एकदम सजिलो लाग्न सक्छ।
हामी लक्षणहरू वा कसरी समस्याहरू पहिचान गर्ने र हामी कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सक्दछौं भनेर हेर्ने कोशिश गर्नेछौं।
मर्मत र पुन: प्रयोग गर्नुहोस्। हामी कम खपत र हाम्रो सामानको जीवन विस्तार गर्न जाँदैछौं।
कसरी बॉश brushcutters को लागी सस्तो नायलॉन लाइन प्रतिस्थापन गर्न
यो आफैंमा मर्मत होइन, तर हामीलाई पैसा बचत गर्नको लागि सानो ह्याक। बॉश स्पेयर पार्ट्स ज्यादै महँगो छ र यस लेखमा म तिमीलाई देखाउँछु बॉश इलेक्ट्रिक ब्रश कटरमा अन्य ब्रान्डहरूबाट नायलन लाइन कसरी प्रयोग गर्ने.
मसँग इलेक्ट्रिक ब्रश कटर छ बॉश AFS २-23--37 1000 W को शक्ति यो राम्रो भइरहेको छ। म धेरै आवश्यक नभए जस्तै गहन प्रयोगको लागि धेरै खुसी छु। यो एक इलेक्ट्रिक ब्रश कटर हो, एक ब्याट्री होइन, यो काम गर्न बिजुलीसँग जडान हुनुपर्दछ।
यद्यपि, ब्रान्डको आधिकारिक नियोन स्पेयर पार्ट्स धेरै महँगो छन्, बरु धेरै महँगो र निर्माण गरिएको छ ताकि तपाईं यसको स्पेयर पार्ट्स खपत समाप्त गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, नायलन थ्रेड केन्द्रमा एक प्रकारको बोल्टको साथ आउँदछ जुन यसलाई भाग्नबाट रोक्दछ।
एन्ड्रोइडमा APK अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
म यसको फाइदा लिन्छु राउन्ड फिक्स मोबाईलहरू मँ धेरै कार्यहरू व्याख्या गर्न र कागजात गर्न खोज्दै छु जुन साथीहरू र परिवारले अक्सर मलाई सोध्छन्। यस मामलामा म वर्णन गर्दछु एन्ड्रोइडमा APK अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने.
म सीधा बिन्दुमा जान्छु, यदि तपाइँ एक एपीके के हो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ र जब तपाइँ एक स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ, लेखको अन्त्यमा जानुहोस्।
मेरो मामला मा म प्ले स्टोर पुन: स्थापना गर्न जाँदैछु जुन खराब काम गर्दछ एक मोबाइलमा जुन हामी मेरो ससुरालाका लागि सिम बिना प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। म यसलाई खोल्न सक्दिन, फ्याक्ट्री रिसेट नगरी पनि र अनुप्रयोगलाई सिधा स्थापित गर्न यो मेरो लागि द्रुत छ कि स्मार्टफोनमा के हुन्छ वा फ्ल्यास यो भन्दा पहिले।
मेरो नौ वर्ष पुरानो पीसीमा मलाई के भएको छ। कम्प्युटर सुरु हुन्छ तर स्क्रिनमा केहि पनि देखिने छैन। असफल भएको कुरा पत्ता लगाउन कसरी त्रुटि निदान गर्ने भनेर म वर्णन गर्दछु, किनकि यो एक सामान्य त्रुटि देखिन्छ।
विफलता सामान्यतया यी places स्थान मध्ये एकबाट आउँदछ:
सानोमा प्रयोगको लागि कसरी एक सार्वभौमिक cistern फ्लश संयन्त्र अनुकूलन गर्न
म एक मर्मत संग आउँछु। केहि अप्रिय योजना बनाईएको छैन, तर लगभग। मसँग छ पानी ट्या tank्की ट्या tank्कीको फ्लश संयन्त्र बिग्रिएको छ। यि धेरै साधारण मर्मत गर्दछन् जसलाई धेरै व्याख्याको आवश्यक पर्दैन, तपाई पुरानोलाई टुक्राउनु हुन्छ, नयाँ किन्नुहोस् र भित्र राख्नुहोस्।
तर त्यो हो मेरो इनारको लागि कुनै मोडेल छैन। तिनीहरू अब विश्वव्यापी आकारका छन् र मसँग चाहिने भन्दा ठूलो व्यास छ। किनभने हामीसँग घरमा जे छ पुरानो र भिन्टेज मोडेल हो।
कसरी टुटेको स्क्रिनको साथ मोबाइल अनलक गर्ने
यो मर्मत लेखमा हामी कसरी हेर्नेछौं एक मोबाइल अनलक गर्नुहोस् जसको स्क्रिन हार्ड ड्राइभ पहुँच गर्नका लागि भंग भयो र फाइलहरू, छविहरू र भिडियोहरू ट्रान्सफर गर्न र रिकभर गर्न सक्षम हुनेछ। केही समय अघि मेरी श्रीमतीले उनको फोन BQ एक्वारीस E5 मा खसालिदियो र उनको स्क्रिन बिग्रियो, यो अलि बढाइएको देखिदैन, तर तलको भागले काम गर्दैन। तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। र यहाँ समस्या आयो। हामी मोबाइल अनलक गर्न सकेनौं, किनकि ढाँचा क्षेत्रले छुँदा प्रतिक्रिया दिदैन। र निस्सन्देह हामी हार्ड ड्राइव पहुँच गर्न सक्दैनौं र फोटोहरू र भिडियोहरू भण्डारण गर्न सक्दछौं जुन यो भण्डार गरिएको छ।
म फोटो लिन सक्षम हुन धेरै विकल्पमा हेर्दै छु। स्क्रिन परिवर्तन गर्नुहोस्, धेरै सफ्टवेयर जसले ढाँचाहरू बिच्छेद गर्दछ र छनौट गरिएको विधि, OTG केबल, यस अवस्थामा स्क्रीन परिवर्तन गर्नु सब भन्दा महँगो विकल्प थियो, किनकि यसको प्रतिस्थापन सस्तो थिएन र मोबाईलले आफ्नो वर्षहरुमा निर्णय गरेपछि। यसलाई नयाँको लागि बदल्नुहोस्। म यस लेखमा जानकारी स collect्कलन गर्न कोसिस गर्दछु र OTG केबल प्रयोग गरेर भिडियो छोड्दछु।
एक पुरानो पुस्तक पुनर्स्थापित गर्दै
मेरो ससुराले मलाई अर्को दिन उसको बचपनबाट एउटा किताब दिन ठीक गर्नुभयो। यो उनीहरूले स्कूल लिएका थिए। स्पेन जस्तो छ। पुस्तक नराम्रो स्थितिमा र भित्री शिटहरूको साथ कभरको साथ थियो। माफ गर्नुहोस्, तर फोटो भन्दा पहिले मैले कुनै चीज फेला पार्न सकिन। मैले तिनीहरूलाई बनाएँ, तर मलाई थाहा छैन तिनीहरू कहाँ छन् :-(
यो तानाशाहीको पुस्तक हो। बच्चाहरूले स्कूलमा लगे, र यो सम्पादकीय Escuela Española को हो। भित्र हामी शुद्ध indoctrination पाउँछौं। राजनीति सामान। तर मलाई लाग्छ कि पुस्तकको ऐतिहासिक महत्त्व छ र यसलाई फ्याँक्नु अपराध हो जस्तो देखिन्थ्यो।
निर्माताहरू, मर्मत र DIY प्रकट हुन्छ
म प्रमुख बीच डाइभिंग गरिएको छु DIY मा प्रकट, सेल्फ रिपेयर, मेकरहरू, जुन मैले इन्टरनेटमा फेला पारेँ। धेरै विचार उपभोक्ताको रूपमा हाम्रो अधिकार र हाम्रो दायित्व र हाम्रो जिम्मेवारीहरूको बारेमा कम उठाइन्छ। प्रख्यात योजनाबद्ध अप्रचलनसँग नजिकको सम्बन्धित बिषय
यदि तपाईं यसलाई मर्मत गर्न सक्नुहुन्न, यो तपाईंको होइन
तिनीहरू केही पुरानो छन्, लगभग क्लासिक तर केवल चाखलाग्दो। मसँग यो लामो समयदेखि ड्राफ्टमा रहेको थियो र मलाई लाग्छ कि इक्कारोमा पहल स्थानको योग्य छ।
यी घोषणापत्रहरूको प्रस्तुतीकरण यो दर्साउनको लागि सुरूवात बिन्दु हो जुन मैले उपभोक्ताको रूपमा अधिकारहरू, दायित्वहरू र जिम्मेवारीहरूबारे बताइसकें। तपाईले केहि पनि लिनु पर्ने छैन, सम्मानित वेबसाइटमा केहि देखा पर्दछ भने पनि, तपाईले सहमत हुनु पर्दैन। तपाईंले आलोचनात्मक सोच विकास गर्नुपर्दछ। के म यसको कुरासँग सहमत छु? के यो सही छ? यसले मलाई उपभोक्ता, अन्य उपभोक्ताहरू, ग्रहको रूपमा कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ? यस कुरालाई कसले चोट पुर्‍यायो? दर्जनौं प्रश्नहरू छन् जुन हामीले आफैलाई सोध्नुपर्दछ र हामीले नैतिकतासँग लिंक गर्नुपर्दछ, खपत को एक नैतिक.
IFixit.com बाट सेल्फ रिपेयर मेनिफेस्टो
कसरी एक क्यासेट टेप फिक्स गर्न
मैले फेला पारे मेरो पुरानो क्यासेट टेपहरू, धेरै संगीतको साथ र धेरै अरू कथाहरू र बच्चाहरूको गीतहरूको साथ। र क्लाइको अझै पनि क्यासेट रेडियो छ भन्ने तथ्यको फाइदा उठाउँदै, मेरी छोरीले उनलाई मन परेको छ कि भनेर जान्न म केही टेपहरू राख्न चाहन्थें। म तिनीहरूलाई दूर फेंक गर्न मा धेरै दु: खी छु।
तर धेरै भाँचिएका छन्, टेप च्यातिएको छ। त्यसोभए म तिनीहरूलाई व्याख्या गर्न जाँदैछु कि कसरी निश्चित गरिएको थियो, एक श्रद्धांजलिको रूपमा, किनकि मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू फिक्स गर्नमा चासो राख्दछन्, तर यदि कोही तपाईको हातमा पर्दछ र तपाईं यसलाई सुन्न सक्षम हुन चाहानुहुन्छ भने, हुनसक्छ प्रविष्टि उपयोगी हुनेछ।
मिनी सिमबाट माइक्रो सिम र नानो सिममा कसरी सिम कार्ड काट्ने
म पाउँछु गुगल नेक्सस एक्सएनयूएमएक्स। म यसको प्रयास गर्दै महसुस गर्छु र यसलाई प्रयोगले महसुस गर्दछ माइक्रो सिम :-(
तार्किक समाधान एक को लागी हो सिम कार्ड नक्कल, तर तिनीहरूले € charge चार्ज गर्छन् (हो, यो पहिले स्वतन्त्र थियो) त्यसैले तपाईले होममेड समाधान खोज्नु पर्छ र यो जान्छ मिनी सिमलाई माइक्रो सिममा रूपान्तरण गर्न घरमा घरमा कार्ड ट्रिम गर्नुहोस्.
हो, मलाई थाहा छ एक मोबाइलमा € 300 खर्च गरेपछि € king लाई धेरै देखिदैन, तर यो व्यक्तिगत मामला भएको छ।
अद्यावधिक गर्नुहोस्: आजकल प्रि-कट कार्डहरू आउँदछन, त्यसैले एक आकारबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्न यो धेरै सजीलो हुन्छ। तर यदि तपाईंसँग पुरानो सिम छ भने यो ट्रिकले अझै पनि तपाईंको लागि काम गर्दछ। यदि तपाईंले € save बचत गर्नुभयो भने, मेरो स्वास्थ्यको लागि कफी लिनुहोस्
ठीक छ, हामी पागल जस्तै काट्नु अघि, एक सानो बारेमा सिम कार्ड